आस्था मिल्दैमा के हुन्छ र ? – मझेरी डट कम
मेरो समय यसरी नै ट्युशन घर गर्दै गुज्रिरहेको थियो । म साबिक झैँ ट्युशन सकाएर हिड्न लागेको थिए । सबै गएपछि आस्थाको एक्स्ट्रा क्लास पनि सिद्दिएको थियो, आस्थाले भनी -” सर हजुर नरिसाउने भए एउटा कुरा सोधौ?”
“ल भूमिका नबाँधिकन छिटो भन,” मैले उसलाई भने।
उसले सोधी, ” हजुरको विवाह भएको छ कि छैन ?”
मलाई झनक्क रिस उठ्यो, मैले आफ्नो रिस नदेखारै उसलाई उत्तर दिएँ, “धत् लाटी, पढाइमा ध्यान लगाऊ, किन चाहियो यी सबै कुरा तिमीलाई !”
उसले पुन भनी – “सर भन्नु न प्लिज !”
आस्थाको धृष्टता देखेर मैले भनेँ, “म एक विवाहित पुरुष हुँ, मलाई माया गर्ने समृद्धि नामकी तिम्री गुरुआमा र प्रज्वल, प्रमिता नामका तिम्रा दुई भाइ बहिनीहरू छन् मसित ।”
मेरो जवाफमा, “धन्यवाद सर” भनेर ऊ त्यो दिन छुट्टिई मसित ।
उसले चस्मा खोल्दै मुस्कुराएर भनी -“विशाल सर ! म आस्था हजुरले ट्युसन पढाएकी विद्यार्थी ।”
मैले उसलाई चिनेको जनाउस्वरूप आफ्नो टाउको हल्लाइदिएँ । उसले सोधी, “सर हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ ?”
मैले भनेँ, “तिमीलाई थाहा छदै छ नि, त्यही ट्युशन सेन्टर, आयो गयो ।”
आस्था बोली -“ल म हजुरलाई सहयोग गर्छु नि ।”
म पुन अलमलमा परे । मा द्विविधायुक्त हुदै मैले प्रतीप्रस् गरेँ, “अली खुलस्त भनन आश्था के भनेको हो यो ?”
मलाई आस्था बारे केही भन्नु छैन । उ हिजो दुख पाएकी पहाडबाट झरेर दिदीमा बसेर पढेकी केटी हो । मैले एउटा अविभावक जस्तै जिम्मेवारी हिजो दिएथेँ र आज पनि त्यो बोध ममा छ । यही कुरा मनन गरेर मैले भनेँ, “प्लिज आस्था ! जिद्दी नगर, म आफै पढाइ हाल्छु नि ।”
“म आज गुरुआमाले बनाएको खाना खाने, भाइ बहिनीलाई पनि हेर्छु सर,” भनेर जिद्दी गर्न थाली । मेरो केही शीप नलागेर उसलाई लिएर मेरो गाउ भालुखुंडी गएँ ।
समृद्धि र नानीहरूसित आस्थाको परिचय भयो । उसले समृद्धिले बनाएको खाना औधि मिठो मानेर खाई । आस्थाले कुरै कुरामा समृद्धिलाई भनी, “गुरुआमा विशाल सर त साह्रै मजाको हुनुहुन्छ, बुझ्ने पनि, वहा जस्तो सहयात्री पाउनु हजुरको अहो भाग्य हो, उहासित म हमेशा बोलिरहन्छु हजुरलाई कुनै आपति त छैन नि !”
खै मलाई के भयो कुन्नि आस्थाको पछिल्लो वाक्यले बिचैमा बोल्न पुगेँ, “भयो भयो आस्था गफ टुंग्याउ, उता तिम्री दिदी बाटो हेर्दै हुनुहुन्छ होला ।”
समृद्धिले निशंकोच आस्थाको बचाउ गर्दै भनिन्, “बोल्न दिनु न त हजुर ! आस्था बहिनीलाई । आस्था बहिनी, मैले मेरो बुढोलाई राम्ररी चिनेको छु । वहाको फरासिलो बानीलाई अरूले अलि बेग्लै सोच्छन्, तर सधै परिवारप्रति उत्तरदायी र उदार हुनुहुन्छ । म यो पनि भन्छु कि वहाँसित आस्था मिल्दैमा के हुन्छ र ?”
समृद्धिको सारपूर्ण वाक्यांशले आस्था लज्जित हुदै चुप लागी । म आस्थालाई लिएर उसको दिदीकोमा पुर्याएर फर्कँदैछु, अनि फर्कदा मैले आफ्नी आस्थालाई सम्झेँ । उनको मप्रतिको विश्वासलाई कतै झर्न नदिने प्रण गरे । मेरो रफ्तारको बाटो क्रमशः हाइस्कुल, पाम्मीचोक, खरखरे, मिलडाडा, मगरगाउ हुदै मेरो घर नेरै पुगेको छु । यतिखेर म मेरो घरको आँगनमा छु मेरी समृद्धि र नानीहरू घर माथिदेखि मलाई नै हेरिरहेछन । मेरो कानमा भने अँझै पनि मेरी समृद्धिको उही वाक्यांश बार-बार आइरहेको प्रतित हुन्छ, “आस्था मिल्दैमा के हुन्छ र ?”
लेखक : विवेक दुलाल क्षेत्री “दमक ”